Burcad badeeda Soomaalida oo qafaashay Markab Talyaaniga Laga Leeyahay – SBC
Burcad badeeda Soomaalida oo qafaashay Markab Talyaaniga Laga Leeyahay
Kooxaha Burcad badeeda Soomaaliya ayaa xeebaha Gacanta Cadmeed ka qafaashay Markab laga leeyahaya wadanka Talyaaniga kaasi oo ay la socdaan Shaqaale gaaraya 23 kuwasi oo u kala dhashay wadama Talyaaniga Ukrein iyo India.
Markabkan oo gacanta u galay kooxaha Soomaaliya 24-kii saac ee la soo dhaafay ayaan la ogeyn meel ay la aadeen waxaana sidoo kale go’an guud ahaanba isgaarsiintii Markabka lagula xiriirayay.
Andrew Mwangura, oo ka mid ah dadka u saraakiisha caalamka ee u dhuun daloola Arimaha Burcad badeeda ayaa shegaay in Markabkaasi lala aaday Xeebaha soomaaliya mana jirto ayuu yiri xiriir weli ay kooxahaasi soo sameeyeen oo ku aadan inay markabka qafaasheen iyo inkale.
Weli si rasmi ah looma shaacin Magaca Markabkan la afduubtay iyo Shirkada Iskaleh ee uu u rarnaa
Weerarka Markabkan talyaaniga lagu qafaashay aya yimid xilli markabkan uu ku socday wadanka Vietnam waxaana lagu weeraray meel si aad ah ugu dhow xeebaha wadanka Yemen gaar ahaan Jasiirada Socatra.
Xeebta gacanka cadmeed oo ay badi ka dhacaan afduubka Gadiidka badda ayaa ah marin biyood isku xira Caalamka intiisa kale gaar ahaana Wadama Yurub Aasiya iyo kuwo kale waxana gadidka xalkaasi isticmaala ay inta badan la kulmaan weeraro isdabjoog ah.